Mbupu na GBL Europe na-eme site n'aka ndị ọsụ ụzọ ọkachamara
HomeMbupu & akara na Chọpụta
Mbupu GBL - Ọ dịghị mgbe na-enweghị koodu nsuso
A na-eji ụgbọ mmiri eme njem naanị site n'aka ndị ozi buru ibu ma nwee ntụkwasị obi. N’ezie ị ga-enweta koodu ntanetị mgbe niile site na E-mail. Will ga-ama ebe ngwugwu na ngwugwu gị ga-abụ na ọ ga-abụ ụbọchị a ga-ebubata ya.
Dozie akwụkwọ njem:
GBL Europe nwere nke ya Gbanwee ndebanye *. 01-2119471839-21-0023
Yana niile mbupụ anyị bụ mgbe a Mpempe akwụkwọ nchekwa Ihe (MSDS) na Asambodo nke Nnyocha nyocha COA.
* 'Ndebanye aha, nyocha, ikike na mgbochi nke Chemicals (REACH) bụ a Iwu European Union akara ụbọchị nke 18 Disemba 2006. REACH na-ekwupụta nrụpụta na ojiji nke chemical substances, na nsogbu ha nwere ike na ahụike mmadụ na gburugburu ebe obibi. Peeji 849 ya were afọ asaa gafee, ma akọwapụta ya dịka iwu kachasị sie ike na akụkọ ihe mere eme nke Union na nke kachasị mkpa na afọ 20. Ọ bụ iwu kachasị siri ike ịbanye na nhazi nke ihe ndị na - egbu kemịkalụ ma ọ ga-emetụta ụlọ ọrụ gburugburu ụwa. REACH malitere ịrụ ọrụ na 1 June 2007, na-enwe usoro mmebi n'ime afọ iri na-abịanụ. Iwu ahụ mekwara ka European Chemicals Agency, nke na-ahụ maka njikwa, teknụzụ na nhazi nchịkwa nke REACH. '
Anyị ga-eme ya mgbe niile otu free resend mgbe erimeri ebiela na nkwenye ekwesighi. Ewezuga iwu a bụ mba ndị Scandinavia.